राष्ट्रिय सभा उप निर्वाचन : कस्को पल्ला भारी ? - Pradesh Today
Homebreaking-newsराष्ट्रिय सभा उप निर्वाचन : कस्को पल्ला भारी ?
राष्ट्रिय सभा उप निर्वाचन : कस्को पल्ला भारी ?
कुल ३०५ मतदाता हुनुपर्ने लुम्बिनीमा ९ जना मतदानमा सहभागी नहुने भएका हुन । ८७ प्रदेश सभा सदस्यबाट ७९ जना र २१८ मतदाता रहेको स्थानीय तहबाट २१७ जनाले मत दिनेछन । प्रदेश सभामा ८ र स्थानीय तहमा १ गरी ९ जना मतदाताको नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको छैन ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा उप निर्वाचन हुदैछ । सोमवार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको घोराहीमा उप निर्वाचनको लागि मतदान हुदै छ । उप निर्वाचनमा दुई जनाको प्रतिस्पर्धामा रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा प्रवेश गरे पछि लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपािर्वाचन हुन लागेको हो ।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका खड्का कारबाहीमा परेका थिए । खड्काको रिक्त स्थानमा लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सोमबार उपनिर्वाचन हुँदैछ । एमालेले खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ भने विपक्षी गठबन्धनबाट दृगनारायण पाण्डे चुनावी मैदानमा छन । एमाले सांसद पाण्डे वैशाख १९ मा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र पक्ष),माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चाबाट मत प्राप्त हुने भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य ७९ जना र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २ सय १७ जना गरी कुल २९६ जना मतदाताको नामावली स्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएपछि कारबाहीमा परेका जसपाका सांसद पुनर्वहाली भए पनि मतदाताको नामावलीमा परेका छैनन् । सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मालाई जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेपछि उनीहरु सवोच्च पुगेर सांसद पद जोगाएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कुल ३०५ मतदाता हुनुपर्ने लुम्बिनीमा ९ जना मतदानमा सहभागी नहुने भएका हुन । ८७ प्रदेश सभा सदस्यबाट ७९ जना र २१८ मतदाता रहेको स्थानीय तहबाट २१७ जनाले मत दिनेछन । प्रदेश सभामा ८ र स्थानीय तहमा १ गरी ९ जना मतदाताको नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको छैन ।
लुम्बिनीका १२ जिल्लामा १०९ स्थानीय तह छन स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उपनिर्वाचनमा मतदाता हुनेछन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ । स्थानीय तहमा कुल मतभार तीन हजार ९०६ छ । प्रदेश सभामा कायम सांसदका आधारमा तीन हजार ७९२ मतभार छ । कुल मतसंख्या सात हजार ६९८ छ ।
विपक्षीको गठबन्धन, एमालेको मत विभाजित हुने अवस्था तथा जसपाका चार सांसद मतदानबाट बञ्चित हुँदा पाण्डेले फराकिलो अन्तरले जित निकाल्ने आकलन गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धन विजयी हुने पहिलो आधार स्थानीय तहको मत देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार पाण्डेलाई बढी मत आउने देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विपक्षी गठवन्धनका बढी छन । लुम्बिनीका स्थानीय तहमा कांग्रेसले ११ नगरपालिकामा मेयर जितेको छ भने उपमेयर १० स्थानमा जितेको छ । गाँउपालिकामा अध्यक्ष २७ स्थानमा जितेको छ भने उपाध्यक्ष ३० स्थानमा जितेको छ । त्यस अनुसार कांग्रेसका प्रमुख र उपप्रमुख र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ६४ मतदाता छन ।
पाण्डेलाई प्रदेश सभाबाट पनि बढी मत आउने देखिएको छ । सभामुखसहित ४१ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत पाण्डेको पोल्टामा पर्छ । त्यसअनुसार विपक्ष गठबन्धनका सांसदबाट पाण्डेले एक हजार ९६८ मत प्राप्त गर्नेछन । सत्तारुढ दलका प्रत्यासी खड्काले ३८ जनाको मत प्राप्त गर्नेछन । एमालेका सांसदहरु सबैको मत गणना गर्दा एक हजार ८२४ हुन्छ । माधव पक्षीय सांसद दुई जना प्रदेश सभामा रहेको भनिएको छ । उनीहरुको मत खड्कालाई नजान पनि सक्छ ।
प्रारम्भिक तालिका९दलहरुको दावि० अनुसार लुम्बिनी प्रदेश मा मतभार यस्तो छ ।
यस्तो छ राजनीतिक अबस्था ।
काँग्रेस माओवादी गठवन्धन ४१×४८.१९६८
स्थानिय तह तर्फ
जसपा ११×१८ .१९८
तमलोपा १×१८ .१८
जनमोर्चा ५×१८. ९०
नयाँशक्ति १×१८ .१८